Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | President U Htin Kyaw sends Workers’ Day message
The following is an unofficial translation of the message sent by Pr U Htin Kyaw on the occasion of Workers’ Day which falls on 1st May.
On this auspicious occasion of the International Workers’ Day, on which the entire workers’ throughout the world are honoured, I wish all the workers in the country health and happiness.
History has witnessed 20- hour working hour per day in 18th century, and dissatisfied with the situation workers’ at that time launched the 8-hour day movement in 1886 in Chicago, the United States of America.
Asaresult, the standard working hour for workers has been set for eight hours per day and 40 hours per week. To honour the efforts of the workers, the International Workers Day has been marked yearly since then for over 120 years.
For Myanmar workers’ also, May Day is the meaningful and an auspicious occasion as this May Day marks the one-month anniversary of the new government elected by the people.
On such an auspicious occasion, the new government pledges to realise the political objective inspired by the people for long. Moreover, the government, hand in hand with the workforce, will strive for ensuring national development through the cooperation among the government, the employees and the employers based on social justice.
Currently, laws are being promulgated to create peaceful working environment with good relations among the tripartite force of the government, the employees and the employers; to enable workers to enjoy the legal rights; to enjoy worksite safety and buildasafety culture to mitigate the workplace injuries; to create job opportunities at home and abroad; to introduce safe labour migration; to conduct on-job training to be able to strengthen competitiveness among workers; to implement social welfare plan which will provide social protection and healthcare to workers with social welfare insurance; and to settle labour dispute through the tripartite system based on free and fair manners.
Moreover, obsolete laws are revoked and repealed or amended.
In accord with the Labour Organization Law enacted in 2011, associations were formed independently and the country saw 1917 labour organisations at the basic level, 105 in township level, 14 in region and state level, seven labour federations and one labour confederation. So also were formed the employee organization and thus there emerged 28 employee organizations in the basic level, one township level employee organization and one federation.
It is safe to say that emerging numerous labour organizations legally; holding tripartite meetings among employer, employee and government to set minimum wage; expanding the knowledge of workers; ensuring good relations between employee and employer by making negotiations through the representatives of labour organizations and the employee in labour dispute; and enabling workers to participate in the tripartite meetings regarding workers’ rights of the government, the employee and the employer are the benefits of forming such organizations.
In cooperation with the International Labour Organisation, the registered labour organizations in states and regions have been lectured on the Freedom of Association and Protection of the Right of Organize Convention 87 of ILO and 162 times of meetings and discussions in that regard could be made since July 2012.
As the elimination of forced labour is important for creating appropriate job opportunities, ward or village tract administrative law was amended in conformity with Forced Labour Convention 29 of ILO. A work plan is laid down and implemented together with the ILO to eliminate forced labour.
Myanmar is now practicing the Worst Forms of Child Labour Convention -182 and with the cooperation of ILO, Myanmar Programme on the Elimination of Child Labour is being launched.
Asamember of ASEAN, Myanmar is actively taking part in the programmes implemented across the ASEAN region together with fellow member countries.
As the ASEAN Community was established on 31 December 2015, workers will be able to migrate from one country to another in ASEAN region freely. At suchatime, our workforce will have to compete with others in the region and there is an urgent need of skilled labours in various fields.
To meet this end, the State has promulgated job and skill development law. At the same time, joining hands with private entrepreneurs, vocational training schools were opened to produce skilled labours. Job policies and migrant workers policies were laid down for overseas workers enabling them to enjoy the rights of the host countries, to get appropriate jobs, to promote skills and to create job opportunities at home and abroad.
The Complaints Mechanism Centres were opened in Nay Pyi Taw and Yangon to fulfill the needs of Myanmar workers at home and abroad the centres are handling the workers’ affairs round the clock. In addition, to provide the information for migrant workers, Migrant Resources Centres (MRC) have been opened in 11 cities including Yangon and Mandalay. Ifaloophole is found in implementing such plans, remedied measures will be taken as soon as possible.
I would like to urge all the workers to abide by the prescribed laws to fully enjoy the rights, to learn the laws and share them to fellow workers to be able to produce full workforce, and to cooperate each other.
On this occasion of the International Workers’ Day, I, hereby, pledge that the new government will stick to the policies of emergingaconstitution which will lead to national reconciliation, internal peace and democratic federal union and raising the social standard of the entire people.
Again I pledge that the government will put all its energies into the tasks of ensuring social protection and safety of the entire people including workers.
I wish all the workers peace of mind while striving with their physical and spiritual prowess for national development.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံမှ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် အလုပ်သမားနေ့အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သောသဝဏ်လွှာ
ချစ်ကြည်လေးစားရပါတဲ့ အလုပ်သမားကြီးများခင်ဗျား -
ဒီနေ့အခါသမယဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အလုပ်သမားကြီးများကို အလေးအနက် ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ် ထားရှိတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရက်မြတ်မင်္ဂလာ အချိန်အခါ မှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ အလုပ်သမားကြီးများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်သ အပ်ပါတယ်။
၁၈ ရာစုအတွင်းမှာ အလုပ်ရှင်များက တစ်နေ့မှာ နာရီ ၂ဝ နီးပါး အလုပ်သမားများကို ခိုင်းစေ ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုခိုင်းစေခြင်းကို အလုပ်သမား များက မကျေနပ်ကြတဲ့အတွက် ၁၈၈၆ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ချီကာဂိုမြို့ရှိ အလုပ်သမားထုက ဆန္ဒပြတောင်းဆို ခဲ့ကြတဲ့အတွက် တစ်နေ့ အလုပ်ချိန် ရှစ်နာရီသို့ လျှော့ချသတ်မှတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို အလုပ်သမားများရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့ဟု ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နှစ်စဉ် မေလ ၁ ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ အလုပ်သမားနေ့အခမ်းအနားများကို ကျင်းပခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၁၂ဝ ကျော်ခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားကြီးများအတွက်လည်း အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်အခါသမယဖြစ်သလို ပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒ နဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အစိုးရသစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်း တစ်လပြည့်မြောက် ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရသစ်အနေနဲ့ နှစ်ရှည်လများ ပြည်သူလူထုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် အကောင်အထည်ပေါ် လာစေရေးအတွက် မဆုတ်မနစ်အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်သလို အလုပ်သမားကြီးများနဲ့ လက်တွဲပြီး လူမှုရေးတရားမျှတမှုအပေါ်အခြေခံတဲ့ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာလည်း အလုပ်သမားကြီးများအတွက် အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်များဖြစ်ပေါ်စေရေး၊ အလုပ်သမား ဥပဒေပါ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိစေရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါ ရရှိခံစားရမှု လျော့နည်း ကျဆင်းရေး၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ သင့်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရေးနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသွား လာမှုဖြစ်ပေါ်စေရေး၊ လုပ်သားထုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ အာမခံအလုပ်သမားများ အတွက် လူမှုအကာအကွယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့ လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး၊ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုရှိတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်စနစ်နဲ့ ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေဆုံးဖြတ် ပေးရေးတို့အတွက် ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခေတ်စနစ်အခြေအနေများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိတဲ့ ဥပဒေများကိုလည်း ပြင်ဆင် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ အသင်းအဖွဲ့တွေ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ဒီနေ့အချိန်ထိ အခြေခံအဆင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းပေါင်း ၁၉၁၇ ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အဆင့် ၁ဝ၅ ဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အဆင့် ၁၄ ဖွဲ့၊ အဖွဲ့ချုပ် ရ ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အလား တူပင် အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့လို့ ဒီနေ့အထိ အခြေခံအဆင့် အလုပ်ရှင် အဖွဲ့၂၈ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အဆင့် တစ်ဖွဲ့နဲ့ အဖွဲ့ချုပ်တစ်ဖွဲ့တို့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း တွေကို စနစ်တကျ ဥပဒေနဲ့အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းလာနိုင်ခြင်း၊ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်နဲ့ အစိုးရသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများ အသိပညာဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးပွားလာခြင်း၊ အလုပ်သမားများရဲ့ စုပေါင်း အရေးဆို တောင်းဆိုမှုများ ကိုဖြေရှင်းရာမှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စား လှယ်တ ွေရွေးချယ်ပြီး အလုပ်ရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းစေခြင်းဖြင့် အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး ပိုမို ကောင်းမွန်လာကာ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ် သမားများ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရာမှာ အလုပ်သမားတွေ ဥပဒေနှင့်အညီ ပါဝင်ဆွေးနွေး လာနိုင်ခြင်းစတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ကို ရရှိစေပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့(ILO)ရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်-၈၇ ဖြစ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့များ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် အသီးသီးမှာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကစတင်ပြီး အသိ ပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာ အဖွဲ့ (ILO) နဲ့ ပူးပေါင်းကျင်းပ ခဲ့တာ စုစုပေါင်း (၁၆၂)ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးမှာ အဓိကကျတဲ့ အဓမ္မခိုင်းစေမှု ပပျောက်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့က အတည်ပြု ချမှတ်ထားတဲ့ အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ်-၂၉ နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ အဓမ္မခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက် ချမှတ်ကာ ILO နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ကလေးသူငယ်တွေကို အဆိုးရွားဆုံးပုံစံနဲ့ ခိုင်းစေခြင်းဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့ရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်-၁၈၂ ကို လက်ခံကျင့် သုံးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေး အလုပ်သမား ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ် (Myanmar Programme on the Elimination of Child Labour) ကိုလည်း ILO နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အားလျော်စွာ အာဆီယံ ဒေသတွင်းမှာ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းများမှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ အာဆီယံအသိုက် အဝန်းတစ်ရပ် တည်ထောင်ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်သမားများဟာ အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ လွတ်လပ် စွာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ လုပ်ကိုင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မိမိတို့ လုပ်သားထုအနေနဲ့ အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများက အလုပ်သမားများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ရမှာဖြစ်လို့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကဏ္ဍအလိုက်နဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့ လိုအပ်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ အလုပ်သမားများရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး အလုပ်သမား တွေအတွက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်းတွေ တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်လုပ်သား များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက်လည်း သွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရ ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်များကို အလုပ်သမားများရရှိစေဖို့၊ သင့်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ရရှိစေဖို့၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်အကိုင် မူဝါဒများ နဲ့ ရွှေ့ပြောင်း သွားလာလုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားများရဲ့ လိုအပ်ချက် တွေကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ Complaints Mechanism Center တစ်ခုစီကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး တိုင်ကြားလာတဲ့ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စတွေကို ၂၄ နာရီ လက်ခံဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့သတင်း အချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်ဖို့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအဝင် မြို့ကြီး ၁၁ မြို့မှာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ထောက်ပံ့ ကူညီပေးရေးဗဟိုဌာန (Migrant Resources Center-MRC) များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွား မှာဖြစ်သလို၊ အားနည်းလိုအပ်ချက်တွေ တွေ့လာရတဲ့အခါမှာလည်း သင့်လျော်တဲ့ပြုပြင် မှုတွေ ကို အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားကြီးများအနေနဲ့လည်း ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိခံစားနိုင်ဖို့ အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား အပြည့်အဝပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေများကို စဉ်ဆက် မပြတ်လေ့လာကာ အလုပ်သမား ကြီးများအချင်းချင်း သိရှိအောင်မျှဝေပြီး အလုပ်သမားထုတစ်ရပ်လုံး စုစုစည်းစည်း ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ လည်း လိုပါတယ်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားနေ့ အခါသမယမှာ အလေးအနက်ထား တင်ပြလိုက်တဲ့အချက်ကတော့ အစိုးရ သစ်အနေနဲ့ အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး တို့ကို ရှေးရှုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ ပြည်သူ လူထုအများစုရဲ့ လူနေမှုဘဝ အဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားရေးစတဲ့ မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွား မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အလုပ်သမားကြီးများ အပါအဝင် ပြည်သူများရဲ့ လူမှုရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ရရှိစေဖို့၊ လူမှုဘဝလုံခြုံမှုရရှိ စေဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ အစွမ်းကုန် အားထုတ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားရင်း အလုပ်သမားကြီးတွေ စိတ်ရဲ့ချမ်းသာ ခြင်း၊ ကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ ပြီးပြည့်စုံပြီး နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း လိုက်ပါတယ်။